”Annaga xitaa ma filaynin in uu Gattuso saamayntan yeelan doono” – Marco Fassone – Gool FM
”Annaga xitaa ma filaynin in uu Gattuso saamayntan yeelan doono” – Marco Fassone
(Milano) 26 Feb 2018 – Agaasimaha Guud ee AC Milan Marco Fassone ayaa qirtay inay “xitaa iyagu la yaabban yihiin saameeynta uu kooxdaasi ku yeeshay” macallin Gennaro Gattuso.
Kooxda Rossoneri ayaa bishii Nofeembar cayrisey macallinkeedii Vincenzo Montella iiyagoo soo dallacsiiyay macallinka junyarka ee Primavera oo ahaa Gattuso.
Guushii xalay ee ay 2-0 uga badiyeen Roma oo raaskeeda joogta ayaa ka dhigan in AC Milan aan xitaa gool laga dhalinin 5-tii kulan ee ugu dambaysay oo ay wada badiyeen iyagoo aan 12 kulan dhinocooda dhunlka la dhigin tan iyo 23-kii Diseembar, waxayna sidoo kale kusoo noqdeen u tartanka boosaska Champions League.
“Gattuso wuxuu sameeyay waxyaabo ay kaliya sameeyaan macallimiinta waaya aragga ah. Laga yaabee inaynaan filaynin inuu saamaytaan yeelan doono, gacan baan u taagney, waxaan sidoo kale u mahad celinayaa [agaasimaha isboortiga Massimiliano] Mirabelli, oo ahaa ninkii igu qalqaaliyay inaan Gattuso magacowno,” ayuu raaciyay Fassone oo la hadlayay Radio Anch’io Sport.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Cagliari vs SSC Napoli 0-5 (Napoli oo hoggaankeeda xajisatey)